Xafladdii lagu taageerayay R/W Kheyre ee London oo lagu kala tegi gaaray, Sabab? - Caasimada Online
Home Warar Xafladdii lagu taageerayay R/W Kheyre ee London oo lagu kala tegi gaaray,...
Xafladdii lagu taageerayay R/W Kheyre ee London oo lagu kala tegi gaaray, Sabab?
London (Caasimada Online)– Xaflad lagu taageerayay ra’iisul wasaaraha cusub ee Somalia, Xasan Cali Kheyre oo jaaliyadda Soomaalida London habeenkii Sabtida ugu qabteen ayaa waxaa ka dhashay buuq sababi gaaray in lagu kala tago.
Buuqaasi ka dhashay furitaankii xafladda intii lagu guda jiray fikrad ay soo jeediyeen qaar ka mid ah dadka laga dhex yaqaan bulshada ee ku nool London, in dadkii kasoo qeybgalay xafladda oo gaarayay kun qof loo jeediyo codsi ahaa inay taageeraan dadka abaareysan ee gobolada Somalia ku ildaran.
Fikrada oo daba socotay in qof walba wixii uu markaas awoodo goobta ku bixiyo, hase ahaatee qaar ka mid ah guddigii qaban qaabada xafladda taageerada ra’iisul wasaare Kheyre ayaa is hortaagay oo diiday in goobta lagu aruuriyo wax lacag ah oo loogu deeqayo dadka ku abaareysan Somalia.
Arrintaasi oo dad badan ay ka caroodeen ayaa buuqii ka dhashay wuxuu ku sigtay in xafladda lagu kala tago.
Mid ka mid ah dadkii ku howlanaa taageeradi dadka abaareysan ayaa bartiisa Facebook soo dhigay erayo kulul oo uu ku cambaareynayay kuna sheegay in 1000 qof oo xafladda timid laga hor istaagay inay sadaqo la baxaan si ay u taageeraan walaalahooda dhibaateysan.